Dezie vidiyo na Linux ngwa ngwa na mfe VidCutter | Site na Linux
Dezie vidiyo na Linux ngwa ngwa na VidCutter dị mfe
The oge nke youtubers Ọ na-aga n'ihu na-agbakwunye ma na-agbasi mbọ ike ịrịgo vidiyo nke ụdị ọ bụla gaa na nnukwu ikpo okwu a, n'otu ụzọ ahụ, nke nta nke nta gụo gụa phẹ gụa ọdu-biribiri. Ihe a niile na - eweta ya, okike nke ngwaọrụ dị iche iche nke na - enye anyị ohere idezi vidiyo, otu n’ime ha bụ VidCutter nke m weere dị ka ngwa kachasị dị mfe ma dị mma iji sonye / belata vidiyo.
VidCutter ọ bụ nzuzu dị mfe iji, nke enwere ekele, mana agbakwunyere na oke ọrụ a ọ dịkwa mma, dị ịdọrọ, họrọ, dozie ma sonyere iji nweta ngwa ngwa vidiyo na vidiyo na-arụ ọrụ.
1 Gịnị bụ VidCutter?
2 Etu esi etinye VidCutter?
2.1 Wụnye VidCutter na Distro ọ bụla
2.2 Wụnye VidCutter na ArchLinux na nkwekọrịta
2.3 Wụnye VidCutter na Debian na nkwekọrịta
Gịnị bụ VidCutter?
Ọ bụ a free ngwá ọrụ, multiplatform (Linux, Windows, MacOS), e dere na QT5 site Pete alexandrou, nke na-enye gị ohere ịmecha ngwa ngwa na ngwa ngwa, kewaa, rụọ ọrụ ma sonyere vidiyo, na-eme ka usoro edezi vidiyo bụrụ ihe ọchị na ịrụ ọrụ nke ọma.
Ma interface ya na ojiji ya dị mfe, yana ebumnuche doro anya na onye ọrụ anaghị pịa ọtụtụ oge, naanị kwụnye vidiyo ndị ịchọrọ isonye / belata / mix, họrọ ahịrị ịchọrọ iji ma chekwaa. N’ime nkeji aka anyị ga-enweta ihe anyị chọrọ 🙂
Etu esi etinye VidCutter?
Wụnye VidCutter na Distro ọ bụla
VidCutter a na-ekesa site na a AppImage, nke onye okike na-atụ aro ka e jiri mee ihe ma ọ bụrụ na distro gị adabereghị na Debian ma ọ bụ ArchLinux, ebe ọ bụ na VidCutter nwere onye nrụzi kachasị maka distros ndị a, na AUR na Launchpad.
N'ọnọdụ nke ịchọ wụnye si AppImage dị nnọọ ibudata ya na: VidCutter-2.5.0-Linux-x64.AppImage, Ikwesiri inwe Qt 5.5 na PyQt 5.5 arụnyere.
Mgbe ahụ, anyị ga-emepe ọnụ ma mee iwu ndị a:
chmod +x VidCutter-2.5.0-x86_64.AppImage
N'otu ụzọ ahụ anyị nwere ike iwunye na eke
sudo pip3 install vidcutter
Wụnye VidCutter na ArchLinux na nkwekọrịta
ArchLinux na ndị ọrụ nwere ike ịwụnye VidCutter ozugbo na AUR, ngwugwu kwụsiri ike na ngwungwu ọhụụ kachasị ọhụrụ a na-emepụta.
AUR: vidcutter, vidcutter-git
Iji wụnye site na AUR, a ga - enwe ọnụ ma gbaa ọsọ:
Wụnye VidCutter na Debian na nkwekọrịta
Ndị ọrụ Ubuntu / Mint / Debian n'etiti ndị ọzọ nwere ike ịwụnye site na Launchpad PPA:
Iji mee nke a, mepee ọnụ ma mee iwu ndị a:
sudo add-apt-repository ppa: ozmartian / apps sudo apt-nweta melite sudo apt-nweta ịwụnye vidcutter
Ngwaọrụ a dị mfe, bara uru ma dị ike ga-enyere ihe karịrị otu aka idezi vidiyo ngwa ngwa. Na mgbakwunye, mmepe ha na-arụsi ọrụ ike ka anyị wee ghọta na a ga-emeziwanye ha oge niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Dezie vidiyo na Linux ngwa ngwa na VidCutter dị mfe
oscar gunset dijo
Enweghị maka Debian / 64-bit
Zaghachi oscar gunsett
Na Gentoo, enweghị m ike ịhapụ ya, na repo m. Naanị.
Ọ bụ Daniel Herrero dijo
You ma ma ọ bụrụ na ọ naghị edozi ọdịyo na vidiyo mgbe ị na-edezi ihe edere na DTT?
Zaghachi Daniel Herrero
Ren Canteros dijo
Ọ ka mma iji ngwa a karịa iji ffmpeg? Achọrọ m nke ikpeazụ, nke maka ihe m chọrọ ịme (vidiyo egwu) zuru m.
Zaghachi Ren Canteros
Ogbogu Okonji dijo
Ezigbo mmemme, ma dịkwa mfe iji. O nweghi otutu atụmatụ, mana nke ahụ bụ n'ezie ihe na - eme ka ọ pụọ iche. Maka m, ebe m matara ya ọ dị mkpa. N’oge na-adịghị anya, m hapụrụ edemede banyere ya na blọọgụ m ( http://www.oblogdeleo.es/corta-e-pega-videos-de-forma-sinxela-con-vidcutter/ ).
Ekele m ndị ọrụ niile na ndị ọrụ Internetntanetị, ana m arịọ gị ka ị jiri obiọma nyere m aka idozi ụfọdụ nsogbu na Vidcutter na Linux Fedora 28 LXDE x86 x64 Operating System. Nsogbu bụ na mgbe ị na-egwu vidiyo vidiyo anaghị egosipụta ya, naanị ụda na-anụ ma ị nwere ike ịhụ okpokolo agba nke vidiyo iji dezie, mana egosighi ya, ọ bụ naanị ọchịchịrị gbara ọchịchịrị na ọdịyo dị.
Ana m ekele gị n'ọdịnihu maka nlebara anya gị, enyemaka na nzaghachi ngwa ngwa.